Fiarovana amin'ny alàlan'ny temperature ho an'ny mpampita China Manufacturer
Description:Fitetezana ny fanaraha-maso ny temperature,Fanaraha-maso ny toetrandro,Kofehy ho an'ny mpandidy
Home > Products > Fiarovana amin&#39;ny fluoro-karbônina > Kilaometatra ho an&#39;ny mpanova > Fiarovana amin&#39;ny alàlan&#39;ny temperature ho an&#39;ny mpampita
Ny singa ao amin'ny mpampita vaovao dia manana mari-drivotra miasa. Raha toa ka mahantra ny fahombiazan'ny fampiasana hafanana ny mpampita vaovao, rehefa mitohy miasa ny mpanova, ny hafanan'ny tsirairay dia manangona ao anaty lavaka, ary ny haavony dia hihoatra sy avo kokoa. SIDA.
Rehefa miasa ilay mpampita vaovao, dia tsy maintsy misy ny famoahana herinaratra. Ny fampidirana fiovàna 5 kW ho ohatra, ny fiakaran'ny hafanana eo amin'ny rafitra dia manodidina ny 75-125 W, izay misy fiantraikany eo amin'ny famokarana herinaratra, ary tokony hivoatra amin'ny famoahana hafanana mba hampihenana ny famoahana ny hafanana.
* Fluorine Corridor Ny Fluorine idealy hafanana hafanana mangatsiaka ary mety ho ampiasaina amin'ny fotoana isan-karazany mifehy hafanana hafahafa;
Ny mari-pamantarana ara-batikan'ny Fluorinated Cleaning Solvent:
Eco Friendly Frfrigerants dia mampiasa:
Fitahirizana sy fitaterana milona mangatsiaka:
Fitetezana ny fanaraha-maso ny temperature Fanaraha-maso ny toetrandro Kofehy ho an'ny mpandidy